कस्ता–कस्ता हिडन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिदै छ विश्वकपमा? | Suvadin !
कस्ता–कस्ता हिडन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिदै छ विश्वकपमा?
टेलस्टार १८ मा 3D सतह रहेकाले बल सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। टेलस्टार १८ मा किक लागेपछि यो आकाशमा निकै समय उड्नेछ। जसले गर्दा यसको गतिमा अन्दाज लगाउन गाह्रो छ। टेलस्टार १८ लाई एडिडासले पाकिस्तानमा बनाएको हो। पाकिस्तानको सियालकोटमा फरवर्ड स्पोर्ट्स कप्पनीमा यसको उत्पादन भएको हो।
काठमाडाैं, ३० जेठ – भोलिबाट रसियमा शुरु हुने २१औं संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितालार्इ प्राविधि मैत्री बनाइएको छ। खेलका क्रममा रेफ्रीलाई सहयोग गर्नका लागि अनेक प्रविधिहरुको प्रयोग गरिनेछ जुन आम दर्शकलाई त्यी विषयमा अवगत नहुन सक्छ।
एनएफसी चिप जडित टेलस्टार १८
विश्वकप २०१८ का लागि विशेषरुपमा तयार पारिएको बल हो टेलस्टार १८। गत वर्ष एडिडासले यो बल सार्वजनिक गरेको थियो। यो बल सन् १९७० को फिफा वर्ल्डकपमा प्रयोग भएको टेलिस्टरकै आधुनिक संस्करण हो। यसको नाम टेलिभिजन र स्टारको संयोजनबाट राखिएको हो। बल कालो र सेतो रंगको थियो। जुन त्यतिबेला श्यामश्वेत टेलिभिजनका लागि तयार पारिएको थियो।
सन् २०१८ को संस्करणमा नयाँ छाला तथा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। बलमा निकट क्षेत्र सञ्चार (नियर फिल्ड कम्युनिकेसन–एनएफसी) चिपको प्रयोग गरिएको छ। जसको माध्ययबाट स्मार्टफोनसँग सञ्चार गर्न सकिने छ। जसले खेल सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने छ।
एडिडासले लगातार १३ औं पटक विश्वकपमा खेलिने बलको डिजाइन गरेको हो। यो बल खुला बिक्रीमा समेत राखिएको छ।
टेलस्टार १८ मा 3D सतह रहेकाले बल सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। टेलस्टार १८ मा किक लागेपछि यो आकाशमा निकै समय उड्नेछ। जसले गर्दा यसको गतिमा अन्दाज लगाउन गाह्रो छ।
टेलस्टार १८ लाई एडिडासले पाकिस्तानमा बनाएको हो। पाकिस्तानको सियालकोटमा फरवर्ड स्पोर्ट्स कप्पनीमा यसको उत्पादन भएको हो।
फरवार्डले सन् १९९४ देखि एडिडाससँग मिलेर खेल सामाग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। २०१४ को विश्वकपमा समेत यही कम्पनीमा उत्पादित बलको प्रयोग भएको थियो।
विद्युतीय प्रदर्शन तथा ट्र्याकिङ प्रणाली
विश्वकपमा प्रयोग हुने अर्को प्रविधि भनेको विद्युतीय प्रणाली पनि हो। टिमका प्राविधिक तथा मेडिकल स्टाफहरु निर्धारित स्थानमा रहेका हुन्छन्। यस्तोमा उनीहरुबीच सञ्चारका लागि एउटा डेडिकेटेड लाइन हुन्छ।
दुई अप्टिकल ट्रयाकिङ क्यामेराले खेलाडी र बललाई ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। यो सबै डाटा निश्चित क्षेत्रमा बसेका कोच, प्राविधिक र मेडिकल स्टाफहरुलाई रियल टाइममै विश्लेषणका लागि उपलब्ध गराउँछ।
यस प्रविधिले खेल समयमा खेलाडीहरु संवादका लागि समेत प्रयोग हुन्छ। यसरी कोचले निर्धारित खेलकै क्रममा कोच गर्न समेत सक्ने छन्।
भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (VAR Technology)
मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एसोसिएसनको बोर्डले भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) प्रविधिलाई अनुमोदन गरेको थियो। सोही अनुरुप यस विश्वकपमा भिएआरको प्रयोग हुनेछ। पहिलो पटक विश्वकपमा भिडियो प्रविधि रेफ्रीका लागि सहयोगीको रुपमा प्रयोग हुँदै छ।
तर, यो प्रविधि निर्णय सच्याउन, अनावश्यक त्रुटीहरु हटाउन तथा खेल बदल्न सक्ने निर्णयबाट छुटेका घटनाहरुको पचिहान गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। यसको प्रयोग जतिबेला पनि गर्न पाइने छैन।
रेफ्रीले निर्णय लिनुभन्दा अगाडि भिएआरसँग जानकारी लिनसक्नेछ। यो प्रविधि प्रसारण तथा ध्वनी यन्त्रमा निर्भर रहेको छ।
गोल लाइन टेक्नोलोजी
अघिल्लो विश्वकपबाट प्रयोग गरिएको गोललाइन प्रविधि यसपटक पनि प्रयोग हुँदैछ। यसका लागि १४ वटा हाइ स्पीड क्यामेरको प्रयोग हुनेछ। बलले गोल लाइन पार गरेपछि यी क्यामेराले एक सेकेन्डको अन्तरालमा भिडियो सन्देश रेफ्रीले लगाएको घडीसम्म पुर्‍याउने छ।